अर्थ / वाणिज्य Archives - Page3of 48 - Online Majdoor
सर्लाही, ६ चैत । सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग लिमिटेड यस ‘सिजन’को उखु क्रसिङ सकेर चैतको पहिलो साता नै बन्द हुने भएको छ । गत वर्ष वैशाख दोस्रो हप्तासम्म चलेको चिनी उद्योग यस वर्ष चैत पहिलो साता नै बन्द हुने भएको हो । सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराको गरी कुल २२ हजार क्षेत्रफलको उखु किसानले […]
नरेश केसी लुम्बिनी, ५ चैत । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा तीव्रता आएको छ । प्रतिवर्ष २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका नेपालका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनकै कारण सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको हो । भौतिक पूर्वाधारमा तीव्र गतिले विकास भइरहँदा उक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र छडको उत्पादनमा पनि विकास भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा ४४ वर्षदेखि आबद्ध रहनुभएका अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक […]
बेइजिङ, २९ फागुन (एएफपी) । कोरोना भाइरसको त्रासदीका कारण मागमा कमी आएपछि चीनमा सवारी साधनको बिक्रीमा गत फेब्रुअरी महिनामा ७९ प्रतिशतले घटेको छ । चीनमा एकै महिनामा यति ठूलो गिरावट आएको पहिलोपटक हो । चिनियाँ अटोमोबाइल उत्पादक सङ्घ (काम) अनुसार यस वर्षको फेब्रुअरीमा सवारी साधनको बिक्री न्यून भएर तीन लाख १० हजारमा सीमित भएको छ । सङ्घले चीनमा सवारी […]
मुस्ताङ, २९ फागुन । ‘नुन लिन भोट’ भन्ने प्राचीन उखान त हो नै यो वास्तविकता पनि हो । आजभन्दा दुई दशक अघिसम्म प्रशोधित आयोनुनको प्रयोग नभएको अवस्थामा नेपालमा विशेषगरी हिमाली भूभाग र चीनबाट नुन आयात हुने गर्दथ्यो । यातायातको पहुँच नभएका कारण नुन लिन हप्तौँ हिँडेर ल्याउनुपर्ने तत्कालीन बाध्यता अहिलेका पुस्तालाई भने एकादेशको कथाजस्तै बनेको छ । ढिकेनुनका रूपमा […]
ताप्लेजुङ, २७ फागुन । देशका हिमाल, पहाड र तराईमा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजाती र समुदाय सम्बद्ध मौलिक संस्कृति स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने आधार बनेको छ । विभिन्न जातजाती र समुदायको पहिचानसँग जोडिएका भाषा, कला, संस्कृतिले नेपालको पहिचानलाई फराकिलो र विशेष बनाएको छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा मौलिक संस्कृतिको गतिलो योगदान छ । मुलुकका विभिन्न भूगोलमा […]
– सञ्चिता घिमिरे काठमाडौँ, २६ फागुन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यसअघि कार्यरत इटालियन कम्पनी सिएमसिले छाडेको निर्माण सामग्री खेर गएको छ । निर्माणस्थल हेलम्बु गाउँपालिकामा ठूलो परिमाणमा रहेको सिमेन्ट र डण्डी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । निर्माण कम्पनीले काम गर्न छाडेर जाँदा निर्माणस्थलमा गिट्टी, बालुवा, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्री थिए । तीमध्ये गिट्टी र बालुवा प्रयोगमा आए पनि अरु […]
यहाँका महिलालाई यतिबेला आलु बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । उनीहरु समूहमा लगाएको आलु धेरै फलेपछि औधी खुशी भएका छन् । खेतबाटै धमाधम आलु बिक्री भएपछि थप उत्साहित बनेका छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र आलु लगाउँदै आएका यहाँका कृषक समूहमा मिलेर विगत तीन वर्षयता सो खेती गर्दै आएका छन् । यो वर्ष अघिल्ला वर्षको तुलनामा […]
मूल्य बढेपछि आलु किसान खुसी
–पेमा लामा बनेपा, २५ फागुन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ३ का आलुखेती गर्ने किसान सुशील अधिकारीले यस वर्ष राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ । गत वर्ष त्यही अनुपातमा खेती गरेको उहाँले यस वर्ष राम्रो आम्दानी पाएको बताउनुभयो । पहिलो पटक खनेर बिक्री गरिसकेका उहाँले प्रतिकिलो रु. ३२ सम्ममा बिक्री गरेको बताउनुभयो । आलुको अवस्थाअनुसार किलोको रु. ३५ सम्म […]